Eqinisweni Minecraft kungenziwa akhiwa sandbox kweqiniso kanye nendlela ukudlala kungaba elingapheli. abahlanganyeli abaningi, ngemva isikhathi esithile, iphrojekthi isiqala uPáll, ngakho kuphakamisa umbuzo ezithakazelisayo ngalokho benzeni "Maynkraft" uma unesizungu. Sincoma ukuthi ufunda lesi sihloko kuze kube sekupheleni, futhi khona-ke ngokuqinisekile uzokwazi ukuthola isisombululo.
Nquma ukuthi abantu, isibonelo, ukhathele ukudlala "Maynkraft» 2D noma 3D, ungasebenzisa iseva. Manje baningi. Abahlanganyeli ungene ku-server, bese iyanyamalala ngokushesha, futhi konke lokhu kungenxa yokuthi baqambe lapha. Ngakho, kungekho lutho olunye olwenzayo noma inqubo iba isidina. Ngisho kumaseva ezinkulu, okuhle ukuthi ungase uphawule isithombe ezithakazelisayo - zamakhulu ezinkulungwane abadlali kuphela ambalwa ukuvela ku-intanethi futhi ngenxa yalokho, abantu abaningi ukhathele ukudlala, futhi musa ngisho ungene isicelo.
Ngakho, yini okufanele uyenze ku "Maynkraft" lapho unesizungu? Eqinisweni, kukhona izixazululo eziningi ezithakazelisayo, mhlawumbe sekuyisikhathi eside abanye waba ajwayelekile, futhi mayelana ngabanye awazi lutho. Ukuze "Maynkraft" wena ungakhathazeki, qiniseka ukuthobela imithetho ethile, manje nixoxe. Umthetho wokuqala eziyisisekelo - musa ukudlala isikhathi eside. Nquma ukuthi singakanani isikhathi okufanele yayiyovela ohlwini lozalo, kunzima kakhulu, njengoba komkhawulo wonke umuntu. Othile bangaphila emhlabeni virtual amahora phezu ezine kanye nothile, futhi ngosuku akwanele. Uma udlala nsuku zonke, khona-ke lo msebenzi ungase uthole nesithukuthezi kusele isonto elilodwa vó, ngakho-ke Kunconywa ukuba uhlale esenezelwe semali isikhathi. Eyesibili umthetho, ozokusiza ukuxazulula umbuzo yini ukuyenza "Maynkraft" uma unesizungu. Akunakusetshenziswa musa ukunaka kwabo kwemithombo isizinda - noma kunalokho, ungakhathazeki ngakho. Ungesabi, izakhi ezidingekayo ungathola nganoma isiphi esinye isikhathi.
Akufanele bophezela ukudlala, nakuba abadlali abaningi bathi ngendlela ehluke kakhulu. Ekugcineni, kufanele unqume ukuthi wenzani "Maynkraft" uma unesizungu. Kufanele udlale ngesikhathi lapho ufuna ngempela ukuba kuqondwe ukuthi lokhu akusebenzi, nokuzijabulisa kuphela. By the way, kulabo uqala ukuzwa iphrojekthi, ethi ayeyitholile imiklomelo akhethekile amaningana. Ngokwesibonelo, umagazini "Ukugembula" ngokuthi "isizukulwane Take-off." Abagxeki kwalentuthuko nalo lihlolwe ngempela eliphezulu.
Notorious Notch, noma kanjani ukubiza umdali "Maynkraft"
Amafomu eyinhloko esikweletu izici zabo
Nokuzikhulula "plie". Squats: elungile ukusebenza inqubo (eyamantombazane)